Rasmi: Hrithik Roshan oo shaaca ka qaaday in aabihiis Rakesh Roshan xanuunka Kansar-ka laga helay! – Filimside.net
Rasmi: Hrithik Roshan oo shaaca ka qaaday in aabihiis Rakesh Roshan xanuunka Kansar-ka laga helay!
Reer Roshan murugo ayaa lasoo daristay balse waxay ku dhiiradeen inay baraha bulshada shaaca kaga qaadaan muragada lasoo daristay si ay ula qeebsadaan kumanaanka taageeraha ah oo ay daafaha caalamka iyo gudaha Hindiya ku leeyihiin.
Superstar Hrithik Roshan ayaa si rasmi ah shaaca kaga qaaday in aabihiis Rakesh Roshan xanuunka Kansar-ka (Cancer) haayo balse nooca bilaawga ah ee heerkiisa cusub yahay aabihiis ku dhacay lagana daaweyn doono madaama xili hore la ogaaday in Rakesh Roshan Kansar-ka ku cusub yahay.
Hrithik ayaa qoraal qiiro badan baraha bulshada soo dhigay “Subaxan aabo ayaan weydiistay inaan sawir isla galno. Waan ogahay in Gym-ka uusan ka baaqaneyn xitaa asigoo qaliin galaayo maanta. Run ahaantii waa qofka ugu ad adag ee aan aqaano dunidaan. Waxaa laga helay xanuunka Kansar-ka midkiisa heerka kowaad gaar ahaan dhinaca cunnaha todobaadyo ka hor. Laakiin weli waa mid isbiiritkiisa sareeyo madaama uu sii wato dagaalkiisa uu Kansar-ka kaga guuleesanayo. Qoys ahaan aadbaan u nasiib badanahay sidoo kalena waan duceesanahay inaan heesano hogaamiye isaga oo kale. Aabo waan ku jeclahay.”
Rakesh Roshan waayihiisii bilawga fanka wuxuu ahaan jiray atoore aflaanta sameeyo kadib wuxuu noqday filim sameeye kaasi oo sabab u ah magaca iyo Superstar-nimada uu maanta wiilkiisa Hrithik Roshan gaaray madaama uu u sameeyay aflaan Big Hits noqdeen aadna loo jecel yahay sida Kaho Naa Pyaar Hai, Koi Mil Gaya, Krrish 2,Krrish 3.
Haatana Rakesh iyo Hrithik waxay qorsheenayaan sameynta Krrrish 4 balse lama ogo haddii mashruucan horey loo sii wadi doono shaqadiisa madaama Rakesh Roshan laga helay xanuunka Kansar-ka sidoo kalena uu qaliin gali doono dhawaan.
Waxaa Aqrisay 637